Himalaya Dainik » पत्रिका बाँडेर पढाइ खर्च जुटाउँदै शर्मिला
पत्रिका बाँडेर पढाइ खर्च जुटाउँदै शर्मिला
जाजरकोट : कुशे–८ पैककी शर्मिला रोकाय त्रिभुवन मावि खलंगामा कक्षा १० मा पढ्छिन्। एसईईको तयारीमा धेरै समय दिनुपर्ने बेला उनी हातमा पत्रिका बोकेर सदरमुकामस्थित विभिन्न व्यक्तिका घर र अफिस पुग्छिन्।
पत्रिका पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै उनको बिहानको ३ घण्टा त्यत्तिकै बित्छ। जसले गर्दा अरू विद्यार्थीजस्तै सहज रूपमा उनले पढ्न पाएकी छैनन्।
चार वर्षअघि आमाको निधन भएको र बुवा नरबहादुर रोकायले दोस्रो बिहे गरेपछि उनका दुःखका दिन सुरु
उनको यो रहर नभई बाध्यता हो। कसैले सहयोग नगरेपछि पढाइ खर्च जुटाउन उनले स्थानीय पत्रिका वितरणको काम गरिरहेको बताइन्। पत्रिका बाँडेबापत उनले मासिक पाँच हजार पाउँछिन्। त्यसैबाट सदरमुकाम बस्ने र पढाइ खर्च जेनतेन जुटेको छ।
चार वर्षअघि आमाको निधन भएको र बुवा नरबहादुर रोकायले दोस्रो बिहे गरेपछि उनका दुःखका दिन सुरु भए।
‘म जसरी पनि पढ्छु, औपचारिक पढाइ सकेर केही सीपमूलक व्यवसाय गर्ने सोचमा छु।’ यसअघि भारी बोक्ने र पल्लादारी गरेर गुजरा चलाउँथिन्। तर,
खाना खर्च, कापी कलम र ट्युसन शुल्कलगायत खर्च जुटाउन उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ। पाँच हजारले पनि पुग्दैन। पैसा नहुँदा कति दिन भोक सहेरै खाली पेट बसेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘म जसरी पनि पढ्छु, औपचारिक पढाइ सकेर केही सीपमूलक व्यवसाय गर्ने सोचमा छु।’ यसअघि भारी बोक्ने र पल्लादारी गरेर गुजरा चलाउँथिन्।
तर, खुट्टामा चोट लागेपछि अहिले ठूलो काम गर्न नसक्ने भएकाले पत्रिका बाँड्न थालेको उनले बताइन्। काम गर्दै पढ्नुपर्ने भए पनि उनी पढाइमा अनुशासित र मिहिनेती रहेको त्रिभुवन माविका शिक्षक सत्यनारायण मण्डलले बताए। अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
१२ घण्टा पैदल हिँडेर ३ जना साथीले बचाए बाबुछोराको ज्यान
निलो पहिरनमा निकै खुलेकी अदिती (फोटो फिचर)
अहिलेसम्म भविश्यवाणी मिलाउँदै आएका वेंगा बाबाले गरे अर्को डरलाग्दो भविष्यवाणी
सासुका असाध्यै प्यारी हुन्छन् यी ४ राशिका बुहारी !
हराएको पर्स १४ वर्षपछि भेटियो, पैसा पनि सुरक्षित ! तर…
काठमाडाैँमा सलमानको बर्थ डे केक काट्न भूवनदेखि सुष्मासम्म सहभागी
अक्षयकुमारले बढाए पारिश्रमिक, पुर्याए १३५ करोड